(ဖုန်းထဲမှာ)သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်က ကျောင်းမှာ အောင်စာရင်းကပ်တယ်။ နင့်ကို ဖုန်းဆက်ရင်မအားမှာစိုးလို့..ငါတစ်ယောက်တည်း သွားကြည့်လိုက်တယ်တဲ့။
ဒီထိအောင်..မထူးဆန်းသလိုပါပဲ..။“အေး..ဘာဖြစ်လည်း..ငါတို့အားလုံး.အောင်ကြတယ်မှုတ်လား” ဆိုတော့ သူ့ဘက်က.အနည်းငယ်..တိတ်သွားတော့..နည်းနည်း..စိုးရိမ်သွားမိပါတယ်။သူကပဲ.ဆက်ပြောတယ် “အေး..ငါပြောမယ်..သေချာနားထောင်သူငယ်ချင်း..ငါတို့အခန်းထဲက..(အားလုံးပေါင်း(၆၂)ရှိတဲ့အထဲမှာ) ၃၉ ယောက်ပဲ.. အောင်ကြတယ်.. တစ်ခြားမေဂျာတွေဆို.. တစ်ခန်း ခွဲ လောက်ထိ.. အကျများကြတယ်” တဲ့။ပြီးတော့ “အောင်စာရင်းမှာ..ငါ.နင့်နာမည်ကို မတွေ့ဘူး”တဲ့။ ဟော............သွားပြီပေါ့...။
ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ဘ၀က တော်တော်ကြီးကို.. အပြဲအစုတ်တွေနဲ့.လှသွားပါတယ်။ကိုယ်မဖြေနိုင်ခဲ့တာ တစ်ဘာသာထဲပေမယ့်(ဒါတောင်..second semester ပဲမဖြေနိုင်တာပါ) ဒီလောက် ထိအောင်တော့..သမီးစံ မှန်းမထားခဲ့ပါဘူး။ဒီစာမေးပွဲအောင်ရင်ဆိုပြီး..ကိုယ်တွေးထားခဲ့တာ..စဉ်းစားခဲ့တာ ရည်မှန်းခဲ့တာတွေ.. အများကြီးမှ..အများကြီးပါပဲ.. ။
စာမေးပွဲမအောင်တော့..ကျောင်းဆက်တက်မည်လား..ဒါမှမဟုတ်..အေဂျီတီအိုင်လက်မှတ်လေး ကိုင်ပြီးတော့ပဲလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ရတော့မည်လား..မစဉ်းစားတတ်တော့။သေချာတာတော့..သမီးစံတခုခုကိုရွေးမှရတော့မည်။ ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ကိုတော့..အင်မတန်ရှက်ပါတယ်။မတက်ချင်တော့...။လုံးလုံးကိုမတက်ချင်တော့။ ဒီလိုဆိုရင်..ဘွဲ့လက်မှတ်လေး.ကိုင်ခွင့်မရတော့ဘူးပေါ့။ရှိစေတော့ပေါ့..။ဒီလမ်းကို.ရွေးလိုက်မိပြီပဲ။
အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့..ဒီနေ့(ကျောင်းမှာ) ကပ်တဲ့အောင်စာရင်းမှာ သမီးစံနာမည်မပါပါဘူး။
Mechatronics အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဆရာ၊ဆရာမများ..ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ.ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
blackroze December 1, 2011 at 12:39 PM
Thandar Lwin December 1, 2011 at 12:43 PM
kztk December 1, 2011 at 1:27 PM
သမီးစံ ရေ.. စာမေးပွဲ ကျတာနဲ့ ဟိုးတွေး ဒီတွေးတွေ လျောက်မလုပ်နဲ့နော်.. တော်ကြာနေ ယဉ်ငြိမ်းပွင့်ပြီးရင် သမီးစံ ဆိုပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာနာမည်ကြီးသွားပါအုံးမယ်.... :)
စာမေးပွဲပဲ... ကျတော့ ဘာဖြစ်လဲနော် အောင်တာနဲ့ကျတာ နှစ်ခုပဲ ရှိတာကို.. ဒီနှစ်ကျတော့ နောက်နှစ်အောင်မှာပေါ့လေ. တစ်နှစ်ပဲ စောင့်ရမှာလေ. လူဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ တစ်ဘဝနဲ့ တစ်ဘဝ မလွယ်ဘူးနော်...
သမီးစံလေး စိတ်ညစ်နဲ့နော်.. အားတင်းထားနော်..
mstint December 1, 2011 at 2:05 PM
ဘဝဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံဘို့ခက်တယ် သမီးစံရေ။
ခြေနှစ်လှမ်းတက်နိုင်ဘို့အရေး ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ထားတယ်လို့သာ မှတ်ယူလိုက်ပါနော်။
Su Yee December 1, 2011 at 2:16 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 1, 2011 at 2:28 PM
Candy December 1, 2011 at 2:33 PM
မမသမီးစံ.. အားတင်းထားနော်.. ဘ၀တခုလုံးနဲ့ယှဉ်ပြီးတွေးလိုက်.. ဒါလေးက သေးသေးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်...
လူဆိုတာသေရမှာပဲလေ.. သေသွားတဲ့အခါပါအောင် လုပ်ရမှာက ဘုရားတရား.. ဒီကျောင်းစာက အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်သေးသေးလေးလို့ တွေးလိုက်နော်..
မအားတာနဲ့ ခုမှပဲရောက်ဖြစ်တော့တယ်.. :D
မြူးမြူး December 1, 2011 at 2:42 PM
jasmine(တောင်ကြီး) December 1, 2011 at 2:43 PM
မဒမ်ကိုး December 1, 2011 at 2:50 PM
ဟေး သမန်စီးလေးရဲ့ ဒါက၀မ်းနည်းစရာမှမဟုတ်တာကွယ်
ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ မင်းသမီးတွေတောင် နားလိုက်တက်လိုက်လုပ်နေကြသေးတာ ဘာအရေးတုန်း
ဘ၀အတွက်အဲလောက်ကြီးအရေးမပါသေးဘူး ညီမငယ် နောက်တဖြေးဖြေးသိလာလိမ့်မယ် .
ဘာမှမဖြစ်ဘူး နောက်တနှစ်ထပ်ပြီး ကျောင်းသူဘ၀ခံစားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲ
နောက်အလုပ်လုပ်တော့မှ အတိုးချပြီးပြန်ဆပ် .အမေ့ကို ဟုတ်ပြီလား
စာမေးပွဲကျတာ နဲ့မဟုတ်တာတွေမစဉ်းစားစေချင်ဘူး..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 1, 2011 at 5:29 PM
ငါ့ညီမက ဒီလောက် စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပြီးသားပါ။
စာမေးပွဲကျတာ တစ်ဘဝစာဆုံးရှုံးတာမှ မဟုတ်တာ
ညီမတို့ကျောင်းတွေ အောင်ချက်ကို လျော့ပစ်လိုက်တာ ဟိုဟိုဒီဒီကနေ အစ်မကြားရပါတယ်.
ပြီးတော့လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကျတာမှ မဟုတ်တာ..
နောက်နှစ်ကို ပြန်ကြိုးစားချင်တယ်။ အခွင့်အရေးက ကိုယ့်ဆီမလာရင် ကိုယ်က အခွင့်အရေးဆီ သွားရမယ်တဲ့
မြတ်ကြည် December 1, 2011 at 5:54 PM
rose December 1, 2011 at 6:20 PM
ချယ်ရီမြေ December 1, 2011 at 6:51 PM
ရပ်နိုင်တော့မှ ဘ၀ရဲ့ပထမခြေလှမ်း စပြီးလှမ်းရမှာ....။
လဲရင်ပြန်ရပ်၊ နောက်ထပ် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေစမယ်၊
ထပြီးမရပ်ပဲနေမည့်အစား၊ ရပ်စမ်း လဲစမ်း ရဲရဲလှမ်းကလေး၊
ပြီးရင်ငါတို့ ပြေးလှမ်းပေါ်တက်ကြရအောင် (မောင်စိန်ဝင်း ပုတီးကုန်း)
သမီးစံရေ... ဘ၀စာမေးပွဲကိုတော့ ဘယ်တောမှ ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ မကျရှုံးပါစေနဲ့၊
သမီးစံရေ အရမ်းနောက်ကျမှ ရောက်တယ်ကွယ်..
စားမေးပွဲကျတာ ဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးတာမှမဟုတ်တာ.လူတွေမှာ အရှုံးကိုယ်စီရှိကြစမြဲလေ.. အရှုံးခြင်းမတူတာပဲရှိတယ်..
chocolatecupidlay December 1, 2011 at 7:24 PM
Kyaw Hnin Se Lwin December 1, 2011 at 7:25 PM
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေကိုကြည့်ရင် အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးလည်းပဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ကြိုးစားလဲထူနိုင်သူတွေပါတဲ့
camomilla December 1, 2011 at 7:27 PM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 1, 2011 at 7:46 PM
ဒီကလေးမ ဘာတွေ မဟုတ်မဟတ် စဉ်းစားနေတာလဲ မသိဘူး။ ဟုတ်ဟုတ်ဟတ်ဟတ်ဘဲ စဉ်းစား။ ကျောင်းပြန်ဆက်တက်။ လဲကျတိုင်း ပြန်မထတော့ဘူးဆိုရင် မြန်မာစိတ်ဓါတ်မဟုတ်ဘူး။ ပြန်ထ ပြန်ထ။ ရော့ အဘလက်ကိုင် ဆွဲကိုင်ပြီး ပြန်ထ။ အမလေးးးး လေးး ဒီကလေးတစ်ယောက်ကတော့ ခက်ပါ့။ အဘတို့ဆီ ဒီလိုမျိုး လဲကျတာလောက်တော့ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ် ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။ ဟေ့... ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။ စာမေးပွဲ တစ်ခါ ကျတာလောက်တော့ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ် ဝေးးး ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။
ဒါဘဲ.. ကျောင်းဆက်တက်ပါ။ မတက်တော့ဘူးလို့ သိရရင် အဘတို့ ရွာဦးကျောင်းက စေတီဘုရားပွဲကျရင် မံစိကို မခေါ်သွားတော့ဘူးးး။း))
အများကြီး တူတူကျတာဘဲကို။ ပျော်တတ်ရင် ပျော်စရာကြီးးးး။ တစ်လွဲမတွေးနဲ့နော်။ ကျောင်းသားဘ၀က သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာ။ ဟာ ဟ။
လှိုင်းပုတ်တိုင်းသာ၊ ကမ်းပြိုပါမူ၊ ဘယ်မှာ မြေကြီးကျန်မည်နည်း။
လေထန်တိုင်းသာ၊ ရွက်ကြွေပါမူ၊ ဘယ်မှာ သစ်တော ကျန်မည်နည်း။
လဲကျတိုင်းသာ၊ ပြန်မထပါမူ၊ ဘယ်မှာ လူမျိုးကျန်မည်နည်း။
မအောင်မြင်တိုင်းသာ၊ စိတ်ကျပါမူ၊ ဘယ်မှာ အောင်မြင်ရှိမည်နည်း။
ကျရှုံးတိုင်းသာ၊ ငိုကြွေးပါမူ၊ ဘယ်မှာ မျက်ရည်ကျန်မည်နည်း။
အိမ်ထောင်တိုင်းသာ၊ မမွေးပါမူ၊ ဘယ်မှာ မိစံရှိမည်နည်း။
မိစံတိုင်းသာ၊ လိုက်ပြေးပါမူ၊ ဘယ်မှာ ပျော်ဖို့ကောင်းမည်နည်း။း)
(ကြားဖူးနာဝထဲ ဟိုဟာဒီဟာ ထိုးထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်)။
ဟန်ကြည် December 1, 2011 at 7:51 PM
အခုမှပဲ ရောက်ဖြစ်တယ်...ရောက်ရောက်ချင်းကို ဆောက်နဲ့ထွင်းခံရတာပါပဲလား...
စာမေးပွဲကျတာကို ပျော်ပျော်နေစမ်းပါလို့တော့လည်း မပြောတော့ပါဘူး...နည်းနည်းတော့ စိတ်ညစ်ရမယ်...ပြီးရင် ကိုယ်ဘာကြောင့်ကျသလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ရမယ်...နောက်တစ်ခါ ပြန်ပြီးတိုက်ကိုတိုက်ရမှာပေါ့...ဒါဖြစ်ချင်လို့ ဒီမှာလာတက်တာပဲ...သူငယ်တန်းကနေ အခုအတန်းအထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ သိန်းပေါင်းများစွာ စတေးပြီး လုပ်လာခဲ့ရတာမဟုတ်လား...မရမချင်း ဆက်ပြီးလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်...ဒါမှပဲ တန်တော့မှာပေါ့...
တစ်ခါတည်းနဲ့တော့ နောက်ဆုတ်ဖို့ စိတ်တောင်မကူးလေနဲ့ သမီးစံ...အောင်မြင်မှုဆိုတာ အဲဒီလောက်လေးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူရစတမ်းဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားတိုင်း ပါရဂူဖြစ်ကုန်ကြတော့မပေါ့...
စာမေးပွဲကျသွားတာဆိုတော့ ကျနည်းကို ကောင်းကောင်းသိသွားပြီပဲလေ...အဲဒီနည်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ပြီး နောက်တစ်နှစ်ထပ်ချလိုက်စမ်းပါ...ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုမရမချင်း ဆက်သာချပေတော့...
နောက်ဆုတ်လိုက်မိလို့ကတော့ ဒီတစ်သက်လုံး အရှုံးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်...တစ်ခုပဲ ပြောချင်ပါရဲ့...“လဲရင်ပြန်ထ...ဒါဘ၀ပဲ”
ဒီလမ်းက မရနိုင်တော့ရင် နောက်တစ်လမ်းက တက်လို့ဖြစ်ပါသေးတယ်လေ...
ကြံ့ခိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်စွမ်းအင်တွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ခရီးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါစေ...
လမင်းငယ် December 1, 2011 at 8:40 PM
ညီရဲ December 1, 2011 at 9:16 PM
Mishell December 1, 2011 at 9:49 PM
CellMoe December 1, 2011 at 10:47 PM
khin nyein chan December 1, 2011 at 11:23 PM
Tha Mee san lay!
Defeat into victory.If you do not succeed at first,try again and again.
May you have strong will.
May you have strong will and strength.
ကိုရင် December 2, 2011 at 6:08 AM
သြော်..ညည်းက MC ကကိုး..အဲလိုပဲ..
MP,MC တွေ second semester ကျရင် မေဂျာဘာသာနဲ့ ထိတာများတယ်..။
ကျုပ်တို့ တုန်းကတော့ မေဂျာချိန်ဆို EP ဆောင်ရှေ့ သွားပြီး ငမ်းကြောထ နေတာနဲ့ မေဂျာဘာသာနေ့ဆို ခေါင်းဖြူအောင် လုပ်ရတယ်..။ပြီးရင် Betech ဆိုတာကြီး ခံနေသေးတော့ ဘွဲ့ယူကြဖို့ တော်ယုံလူ မစဉ်းစားကြတော့ဘူး..
စာမေးပွဲအောင်မလားလို့ ကြိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီး ဦးချလိုက်ရတာအမော..
ဘယ်အောင်မတုန်း..ရုပ်ကိုက အုန်းသီးခေါင်းမှာ ပန်းပန်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့.. :D
ကျောင်းစာမေးပွဲ မဖြေနိုင်တာ အရှုံးမဟုတ်သေးပါဘူး..ရှေ့ မှာ အများကြီး ကန်သေးတယ်..ထပြီး အားယူဖို့ လုပ်တော့..အချိန်မရှိဘူး..
san htun December 2, 2011 at 8:06 AM
8Yar December 2, 2011 at 1:12 PM
သျှင်နေမင်း December 2, 2011 at 8:10 PM
ဘ၀ဆိုတာ အတက်အကျနဲ့ ပျော်စရာပါ...
အောင်မြင်မှုကို သာယာခဲ့ ရင်..ကျရှုံးမှုကို ခံနိင်ရည်ရှိရမှာပေါ့ ...
မိစံ ပိုစ် မပြောင်းသေးဘူးလား သူများတွေ စိတ်မကောင်းအောင်
ထထ ထမင်းချက်တော့ အိုဘစံယာထဲသွားရမယ်
ဘုန်းဘုန်းတောက် December 3, 2011 at 2:03 AM
စိတ်ညစ်နေလို့လည်း အောင်သွားမှာမှ မဟုတ်ထှာ ဂျင်ဆန်းမီရယ်။ ပင်ပန်းရုံပဲ ရှိမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် စိတ်မညစ်နဲ့နော်၊ အားတင်းထားနော်။ ဒါပဲ။
သူများကိုတော့ အဲဒီလို ပြောတတ်တာ။ ၂၀၀၀-ခုနှစ် ကမ္ဘာအေးသာသနာ့တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ဖြေစဉ်တုန်းက အင်တာဗျူးကျသွားတုန်းက အမလေး ခံစားလိုက်ရတာ (ဆွမ်း...) ဂျင်ဆန်းမီရေ။ ပြောမမနေနဲ့တော့။ ဒါပေမယ့် ခဏပါကွယ်။
လွမ်းပိုင်ရှင် December 3, 2011 at 4:56 AM
အလင်းသစ် December 3, 2011 at 5:15 AM
အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ Assume နဲ့ Neglect နဲ့ကြား
ဗျာများနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်လား။။ ကျသွားပြီးတာ
ကို Neglect လုပ်လိုက်ပေတော့ဝေ့။။
san htun December 3, 2011 at 7:27 AM
အမ စာမေးပွဲ ကျတုန်းက ရေးထားတဲ့ ပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး အားတင်းကာ ကြိုးစားပါနော်
အပျိုကြီးရေ ... စာမေးပွဲ ကျ တယ်ဆိုလို့အားပေးစကားလေးဘာလေးပြောမလို့... ဘယ်လိုပြောရင် ကောင်းမလဲလို့ 
စဉ်စားရင် comment ထဲဝင်လိုက်တာ ... အပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ က
မောင်ဘုန်း ပြောတာပိုကောင်းတဲ့ အားပေး စကားတွေ ဖြစ်နေလို့ 
ဘာမှ ထွေထွေ ထူးထူး တော့ မပြောချင်းဘူး ...ကွယ် ...
ဒါပင်မဲ့ မောင်ဘုန်း ဘဝမှာ အပျိုကြီးလိုမျိုး တစ်ခါ ဖြစ်ဘူးတယ် ...
မောင်ဘုန်း ကျောင်းထွက် ပြီး လုပ်ငန်း ခွင် ဝင်တဲ့ နည်းကို ရွေးလိုက်တယ်လေ ....
အခြေနေတစ်ခုကြောင့် ဆိုပင်မဲ့ တကယ်တမ်း ဝန်ခံ ရရင် ကျောင်းပြန်တက်ရမှ ရှက် လို့ဆိုပြီ ရွေးချယ်လိုက်တယ် ...
နောက်ဆုံးတော့ ထင် ထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလေ ...
ဒီလိုပဲ ... လုပ်သလိုမဖြစ်တော့ ဖြစ်သလိုလုပ်ရင်းနဲ့ 
မောင်ဘုန်း ရဲ့ ဘဝမှာ အဲ့ဒီ တစ်နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ကို အမြဲတည်း ပြန်တမ်းတနေမိတယ် ...
အပျိုကြီး ဘာလုပ်သင့် တယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးနော်
အပျိုကြီးက မောင်ဘုန်း ထက်တော်တယ်လေ
အပျိုကြီး လို အသက်ရွယ် တုန်းက မောင်ဘုန်း အဲ့လောက် မတော် ခဲ့ဘူးလေ
အပျိုကြီး ... မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မောင်ဘုန်း မျှော်လင့်ရပါတယ် ....
မောင်မောင် December 3, 2011 at 12:45 PM
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) December 5, 2011 at 10:19 PM
Mechatronics လား ဆြာပဲး)
ကြိုးစားသမီး အခွင့်ရေးရှိတုန်း ကျုပ်တို့ဆိုပညာသင်ချင်လွန်းလို့ တပိုင်းသေနေတာ
အခွင့်ရေးဆိုတာ သမီးလက်ထဲက အဆုံးအဖြတ်ပဲကွယ့်
Anonymous December 6, 2011 at 3:38 AM
မြသွေးနီ December 7, 2011 at 12:19 PM
ကျောင်းသားမှန် စာမေးပွဲ အမြဲအောင်ရမယ်မှ မရှိတာ...
စာမေးပွဲဆိုတာလည်း ကျချင်ကျနိုင်တာပဲ။ မမြသွေးလည်း အဲ့လိုပဲ ပထမနှစ်မှာ မကျစဖူးကျဘူးတယ်..။ ခံလိုက်ရတာ ပြောမနေနဲ့..လှိမ့်နေတာပဲ ( အမှန်က ကျောင်းလခ တစ်လမသွင်းမိလို့ အောင်ရက်နဲ့ အောင်စာရင်းမထွက်ပေးတာ။ နောက်မှ ဆပ်ပလီနဲ့ ကြွေးကျန်တွေကို အောင်စာရင်းထွက်တယ်)
အရေးကြီးတာက ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲ..၊ ဘာဖြစ်ချင်လဲ အရေးကြီးတယ်။ လောလောဆည် စိတ်ကတော့ ညစ်ရမှာပဲ။ တို့လို့တန်းလန်းနဲ့ ဘယ်အရာမှ မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ သတိပြုပေါ့။ စမိပြီဆိုမှတော့ ဆုံးခန်းတိုင်တာပဲ ကောင်းတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ ဇွဲမလျှော့စေချင်ဘူး...။ နောက်တစ်ကြိမ် စာမေးပွဲကို စိန်ခေါ်ပစ်လိုက် စမ်းပါ...။